ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူဘုရားသခင် - ဆွစ်ဇာလန်၏ကမ္ဘာချီဘုရားကျောင်း
မီဒီယာ > မဂ္ဂဇင်းအာရုံစိုက်ယရှေုသညျ > မဂ္ဂဇင်းအာရုံစိုက်ယရှေုသညျ 2021-01 > ဘုရားသခင်သည်ငါတို့နှင့်အတူရှိတော်မူ၏
လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၂၀၀၀ ကျော်ကယေရှုမွေးဖွားခြင်းကိုမှတ်မိသောခရစ်စမတ်အားကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူဘုရားသခင်“ ငါတို့နှင့်အတူရှိတော်မူသောဘုရားသခင်” ဖြစ်သည်။ သူသည်ဘုရားသခင်၏သားတော်၊ အသွေးအသား၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်ဝသူဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သခင်ယေရှုသည်ခမည်းတော်၌ရှိကြောင်း၊ သူသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွင်း၌တည်ရှိကြောင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သူ၌ရှိကြောင်းဖော်ပြသည့်ယေရှု၏စကားများကိုဖတ်ရသည်။
အဲဒါဟုတ်ပါတယ်! ယေရှုသည်လူသားဖြစ်လာသောအခါသူ၏ဘုရားသခင့်ပုံစံကိုစွန့်လွှတ်ခဲ့သည်။ သူသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုပြန်လည်သင့်မြတ်စေရန်၊ ကားတိုင်ပေါ်တွင်သွေးထွက်သံယိုမှုကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အစ်ကိုများအပြစ်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်၏ရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ယခုအချိန်တွင်အသစ်စက်စက်နှင်းကျနေသောနှင်းကဲ့သို့စင်ကြယ်ပြီးပြည့်ဝစုံလင်လှ၏။
ဒီအံ့သြစရာကောင်းတဲ့ရွှင်လန်းမှုခံစားရဖို့အခြေအနေတစ်ခုပဲရှိတယ်။ ဒီအမှန်တရား၊ သတင်းကောင်းကိုယုံပါ။
Ich umschreibe diese Bedingung mit Worten aus dem Buch Jesaja 55,8-13 etwa so: Gottes Gedanken und Wege sind so viel machtvoller als unsere, wie der Himmel höher ist als die Erde. Regen und Schnee kehren nicht zum Himmel zurück, sondern feuchten die Erde und bringen Frucht, damit Menschen, Tiere und Pflanzen ernährt werden. Aber nicht nur das, auch Gottes Wort findet bei vielen Menschen Gehör und bringt reichen Segen.
ဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းစွာ ထွက်၍ ဤသတင်းကောင်းကိုဟောပြောရန်မှာကျွန်ုပ်တို့၏တာဝန်ဖြစ်သည်။ ပရောဖက်ဟေရှာယပြောခဲ့သည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့ရှေ့မှောက်ရှိတောင်များနှင့်တောင်ကုန်းများပင်ဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းကြလိမ့်မည်။ တော၌ရှိသမျှသောသစ်ပင်တို့သည်လက်ခုပ်တီး။ ရွှင်လန်းဝမ်းမြောက်ကြလိမ့်မည်။
ပရောဖက်ဟေရှာယသည်manမာနွေလကိုသူမမွေးဖွားမီအနှစ် ၇၀၀ ခန့်ကကြေငြာခဲ့သည်။ ယေရှုသည်မြေကြီးပေါ်သို့အမှန်တကယ်ရောက်ရှိလာခြင်းသည်မျှော်လင့်ခြင်း၊ ဤအချိန်အတောအတွင်းသူသည်ဖခင်ဘက်သို့ပြန်လာပြီးမကြာမီသူနှင့်အတူရှိရန်အရာရာကိုပြင်ဆင်နေသည်။ ယရှေုသညျအကြှနျုပျတို့ကိုအိမ်သို့ရောက်စေဖို့ပြန်လာပါလိမ့်မယ်။